Деревня резчиков по дереву - Мас, Бали, Индонезия » Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Woodcarvers Village - Mas
Mas (Desa Mas) ireo mpanao asa tanana. fiantsenana
Обзор деревни резчиков по дереву — Мас
Ity tanàna ity dia eo akaikin'ny tanànan'i Ubud. Izy io dia malaza amin'ny mpanao asa tanana sokitra malaza indrindra any Bali. Tamin'ny tapany voalohan'ny taonjato faha-1 dia niseho teto ny mpanao sokitra, teo ambany fitaoman'i Eraopa, izay nanomboka namorona ny fomba maoderina azy manokana. Nanjary nalaza tany amin'ny firenena maro ny kanton'izy ireo.
Afaka tonga eto ianao fiantsenana ary ankasitrahana fotsiny ny vokatra nohamasinin'ny tompo. Ny fivarotana fotoana dia manolotra fitaomana haingo vita amin'ny hazo: sarin'ny sarin-tsoratra avy amin'ireo angano ao an-toerana, tarehin'ny olona, ​​biby, sns.
Sangan'asa mahavariana vita amin'ny tanan'olombelona ireo, mitam-piadiana sy antsy tsotra. (sendra nanatrika ny famoronana sangan'asa iray hafa ny mpanoratra, ary nomem-boninahitra mihitsy aza izy naka ny fitaovana avy eo am-pelatanan'ny tompony ary nanao kapoka indroa tamin'ny dragona Komodo ho avy) 🙂
Endri-javatra sy rivo-piainana ao an-tanàna
Ny tanànan'i Mas dia mivelatra eo anelanelan'ny havoana, hantsam-bato, tanimbary ary ala mando. Ahitana arabe tery sy miolikolika, izay mora very. Ny indostrian'ny fizahantany dia mbola tsy niforona tanteraka teto. Noho izany, ao Mas, azonao atao ny manadino momba ny sivilizasiôna vetivety, miditra amin'ny lovantsofina taloha.
Ny mponina eo an-toerana dia mpivavaka be ary mitarika fomba fiainana milamina tokoa, tototra tanteraka amin'ny asa-tanany. Mas dia manana mponina manodidina ny 13. Ny asa lehibe tokony ho 000 isanjaton'izy ireo dia ny sokitra hazo amin'ny fivarotana ny vokariny manaraka.
Tanànan'ny mpanao sokitra hazo. Mas. Bali
Saika ny arabe rehetra dia tototry ny atrikasa fanaovana asa tanana kely sy fivarotana. Ahitana sangan'asa tena izy ireo indraindray. Izy ireo koa dia azo jerena amin'ny fampiratiana ao Ubud.
Indrisy, ny fangatahana betsaka dia nanjary niharatsy ny kalitaon'ny asa tanana. Amin'ny toerana maro, dia mivarotra asa-tanana taloha izy ireo, natao ho an'ny mpividy marobe.
Village Mas village amin'ny zanabolana
Деревня резчиков по дереву Деса мас (Desa Mas) расположилась непосредственно возле Убуда, у южной его границы. От центра Убуда, минут двадцать ехать на байке, или такси. Карта есть ниже.
adiresy: Pasar desa mas ubud, Cokorda Rai Pudak 80571, Mas, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.544553, 115.271993
Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny fasana dia 7-10 minitra indray mandeha.
Ny sandan'ny serivisy fitaterana mankany amin'ny toeram-pandevenana avy ao amin'ny tanànan'i Tourgnan dia 700 r olona na roa.
Ny saran'ny fandefasana amin'ny sambo avy amin'ny tanàna akaiky indrindra - 150 - 000 200 rupees, isan'olona (miankina amin'ny haben'ny vondrona)
Ny fotoana mety indrindra hitsidihana ny tanànan'i Mas hiantsena dia amin'ny andro fiandohan'ny herinandro sy alohan'izay, rehefa vitsy ny mpizahatany, ka noho izany dia tsy dia lafo ny vidin'ny magazay.
Sarin'ny asan'ny mpanao asa-tanana
Fivarotana asa-tanana any Bali
Sary sokitra hazo. ny tanànan'i Mas
Mpanao asa tanana an'ny Mas Village
Ny fahatsiarovana tsara indrindra avy any Bali
Fahatsiarovana Bali. Sary sokitra hazo
Village Mas amin'ny sarintany
Tao amin'ity vohitra ity Mas .. nahita ny fomba fiasan'izy ireo, ny fomba fanaovan'izy ireo ny sangan'asany.
Ary sendra izany fa niasa tamin'ny hazo izy taloha. Tsy mpanao kabinetra aho, fa misy zavatra azoko. Ka manao fahagagana tokoa ny Bali! Nahita sanganasa toy izany tamin'izy ireo aho, ka tsy afaka mino izany hoe asa tanana izany ... ary vita amin'ny hazo mihitsy aza.
Niresaka tamin'ny tovolahy aho tany, nilaza izy ireo fa efa nanao ny asa-tanany hatramin'ny taranaka fara mandimby .. ary mora ny mino azy rehefa hitanao ny fiasan'izy ireo tsy misy ezaka sy mazava.
Удивительно ведь и то, что для тех изделий, что они делают, нужен не лишь профессионализм в обращении со стамеской, но и художником нужно быть хорошим, скульптором, так как они ваяют графически очень сложные объемные объекты.. с мелкими четкими деталями…
izay sarotra ny manintona, mainka fa ny hika.
Tsara, mazava ho azy, ny Bali. Tena manao fahagagana tokoa izy ireo.
Indray mandeha tany Ubud dia nisy olona iray nanatona anay.
atolotra hividy vokatra vita amin'ny taolana omby.
Ka tsy afaka nino ny masoko aho, fa naninona ilay izy. Ny antsipiriany kely toy izany dia notapahina, toy ny vokatra nalaina tamin'ny 3d max, fa tsy tena zavatra.
Ary ho an'ny denaria sasany dia natolony hividy. Tsy tadidiko ny isa, fa nampihomehy ny vidiny. Zavatra latsaky ny $ 5, heveriko.